Leanne Bayer - International Access Equal Access
Madaxa Xisbiga - U codeynta Nabadda ee USAID, Ivory Coast
Leanne waxay leedahay 20 sano oo waayo-aragnimo maareyn ah barnaamijyada ah ee ku wajahan horumarinta bulshada, xukunka baahinta maaliyadeed, rabshadaha ku saleysan jinsiga (SGBV), iyo xallinta khilaafaadka.
Leanne waxay ku biirtay EAI bishii Janaayo 2019 kadib markay soo saartay khibrad balaaran oo shaqeyneysa oo ay weheliyaan Bangiga Adduunka, PADCO / AECOM, OSCE, CARE International, IOM, iyo hay’ado badan oo UN ah.
Maaddaama ay tahay Madaxa Xisbiga ee Codadka Nabadda (V4P), Leanne waxay ku dabaqeysaa aqoonteeda qoto dheer si ay u taageerto naqshadeynta kooxda maxalliga ah iyo hirgelinta mashaariicda dhiseysa tiknoolajiyada iyo awoodda u doodista hoggaamiyeyaasha bulshada, dhisidda buundooyinka u dhexeeya bulshada iyo hoggaamiyeyaasha gobolka iyo qaranka. , iyo kordhinta arrimaha bulshada iyada oo loo marayo barnaamijyo warbaahineed oo saameyn weyn ku leh Maali, Niger, Chad, Burkina Faso, iyo Cameroon.
Iyadu waa khabiir ku xeel dheer arrimaha bulshada, gaar ahaan horumarka bulshada, hawlgelinta muwaadinnimada, iyo la xisaabtanka bulshada. Maareeye sare khibrad leh, waxay maamushay saddex hawlgal oo Bangiga Adduunku (oo dhan $ 65 milyan) oo Bariga Afrika ah oo diiradda lagu saaray horumarka bulshada horseed ka ah. Labadii sano ee la soo dhaafay, waxay hoggaanka u haysay bulshada kaqeybgalka bulshada ee Bangiga Adduunka, iyadoo ay isu keenayaan 900 xirfadlayaal gudaha iyo dibadaba ah. Si aad ula xiriirto Leanne Bayer fadlan emayl ku soo dir info@equalaccess.org.